Amai Mujuru Vanosarudzwa seMutungamira weBato reNPP
Mutungamiri weNPP, Amai Joice Mujuru
Bato rinopikisa reNational People’s Party raita kongiresi yaro yekutanga rikasarudza vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joice Mujuru kuti vari tungamire kwemakore mashanu anotevera.
Nhengo dzebato reNational People’s Party dzabva kumatunhu ose enyika nhasi dzaungana paCity Sports Centre muHarare padzapinda mumusangano wekongiresi yekutanga yebato iri kubva parakavambwa.
Vachitaura pamusangano uyu, uyo wavasarudzwa kuve mutungamiri weNPP kwemakore mashanu ari kutevera, Amai Mujuru vati zvakakosha kuti mapato anopikisana neZanu PF abatane ose iota chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya.
Mashoko aAmai Mujuru aya anouya apo vaimbove mutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa VaMorgan Tsvangirai vakabatana nemamwe mapato matanhatu mukupera kwesvondo vakaumba mubatanidzwa wemapato uri kudaidzwa kuti MDC Alliance.
Vachipa mashoko avo ekukorokotedza Amai Mujuru nekuita kongiresi yavo yekutanga, VaTsvangirai vati havasi kuona chikonzero chinoita kuti vasabatane naAmai Mujuru vachiti zvinangwa zvemapato avo zvakafanana.
Izvi zvatsinhirwa nemutauri wavo, VaLuke Tamborinyoka.
Zvichakadai, Amai Mujuru vati bato ravo richashanda zvakasimba kuedza kuvaundudza hupfumi hwenyika, kuona kuti mitemo yenyika yatevedzerwa, vechidiki vawana mabasa uye kuti Zimbabwe idzokere mugungano reCommonwealth.
Vatiwo kana vakapinda mumasimba, sebato vachaona kuti vose vakaendesa hupfumi hwenyika kunze kwenyika hwadzoswa pasina anosungwa vakati zvakare chirongwa chekugoverwa kwakaitwa veruzhinji minda hachisi kuzodzoserwa kumashure.
Zvichakadaro, vataura akamirira bato rePeople’s Democratic Party inotungamirirwa naVaTendai Biti uye vari sachigaro webato iri, Amai Lucia Mativenga, vati vafara zvikuru kuti NPP yasarudza mudzimai kuti atungamirire bato iri, vakakumikidza madzimai kuti abude nehuwandu hwawo kuti anonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Kongiresi yeNPP yatambirawo bumbiro remitemo richange richisunga nhengo dzebato iri. Nhengo dzapinda mumusangano wekongiresi iyi dzapawo masimba akawanda kuna Amai Mujuru ekuita zvinhu zvavanoona kuti zvinoendesera mberi zvido zvebato ravo pamwe neveruzhinji munyika.
VaJohn Mvundura pamwe naVaSamuel Sipepa Nkomo ndivo vasarudzwa kuve vatevedzeri vaAmai Mujuru, kuchitiwo VaGift Nyandoro vasarudzwa kuva munyori mukuru mubato iri.
Amai Marian Chombo ndivo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai uye VaLloyd Masiya ndivo vasarudzwa kuve mutungamiri weboka revechidiki muNPP.
Mushure mekusarudzwa kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu ari kutevera, Amai Mujuru vabva vadoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo dzeNational Executive Committee.
Vamwe vatungamiri vemamwe mapato vanga varipo pakongiresi yeNPP iyi avo vakakokwa vanga vachisanganisirawo mutungamiri webato reZapu, VaDumiso Dabengwa, mutungamiri webato reTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, mutungamiri webato reZunde, VaFarai Mbira, pamwe nemutungamiri webato reDare, VaGilbert Dzikiti.